Isilonda esingasoze saphola - Ilanga News
Home Izindaba Isilonda esingasoze saphola
AMAPHOYISA SAGCINA UKUWABONA NGO-2000, EZOLANDA IZIDUMBU ZABAFOWETHU
AMALUNGU omndeni wakwaHadebe emi nesalukazi esingizalayo (uMaMpinga) ongemuva. Kwabahlezi phansi ngumfowethu, uMalusi (ogqoke isikibha esiphuzi), owasinda kubulawa abafowethu, nami (Sazi) ofake isikibha esibubende.
“PHUTHUMA ndoda, phuthuma, phuthuma la ekhaya.” Umfowethu engimelamayo, uMalusi Hadebe, nguye lo owayengishayela ucingo, ehefuzela kuzwakala ukuthi amaphaphu aphezulu, edliwa yizinhlungu, ekhuluma ngezwi elalinokunqamuka kungathi uphelelwa wumoya.
Kwakuwumhla ka-19 kuNhlangulana (June) 2000 ekuseni, kuwusuku olwalunomoya owawuheleza kancane, unokunsonsotha kokubanda eThekwini.
“Sebebabulele abafowethu, kumanje ngikwi-ambulensi noNomusa (Gumede, ingoduso yakhe).”
Ngavuka kwangathi ngizofumbeka phansi nxa ngizwa lezi zindaba, ngizithola ngisefulethini engangihlala kulo ngokubambisana nomunye wozakwethu esasithathela naye izindaba zezemidlalo.
Ifulethi leli esasiqube kulo likuVictoria Embankment,enkabeni yedolobha iTheku.
Ngokuhamba kwesikhathi, ngathola ukuthi umnewethu, uMalusi, naye wayethole imihuzuko kulokhu kuhlaselwa komndeni wethu okwedlula nempilo yabafowethu abadala kithi sobabili, uNhlanhla Knowledge Hadebe noThemba Victor Nomkruca.
UMaGumede waphangalala naye ngemuva kwamahora ambalwa engeniswe esibhedlela.
Ngazama ukubuza kuMalusi ukuthi kwenzekeni, kodwa wabe eseluqathaze phansi ucingo, mhlawumbe esiza mina ngokuthi anganginiki yonke imininingwane enyantisa igazi ngingakazifikeli mathupha nami ekhaya.
Konke lokhu kwenzeka eDube Village, eNanda, endaweni engathuthukisiwe ngokutheni ngaphandle kwemixhaso kahulumeni nemigwaqana emincane, eqhele ngo-25km uma usuka enkabeni yeTheku ubheke enyakathontshonalanga yaleli dolobha.
EDube Village kulapho ubaba osizalayo, uDaniel Boy Hadebe, nomama uLilian NoMgqibelo, uMaMpinga, basikhulisa khona, siyizingane zabo eziyisishiyagalombili, abafana abawu-5 nodadewethu abathathu.
Ubaba wayengumshayeli wesithuthuthu, umsebenzi wakhe kuwukuhambisa amaphasela.
Iqhawe lami ladlula emhlabeni lisemsebenzini ngo-1992 ngemuva kokuba isithuthuthu salo sitholane mahlanze nemoto, kwaba ukuphela kwalo njalo.
Ubaba waba ngomunye wabantu bokuqala ngaseku-pheleni kweminyaka ka-1970 owaba nenhlanhla yokusikelwa umhlaba wokuthi naye akhe umuzi endaweni okwakulipulazi likaJohn Langalibalele Dube, umsunguli wephephandaba, ILANGA.
Yebo, ngikhuluma ngaye impela uMafukuzela, yena lo owaqokwa waba ngumengameli wokuqala we-African Native Congress eMangaung, eFree State, ngo-1912.
Ngesikhathi ngithola ucingo kumfowethu, edinda isililo engangingakaze ngimuzwe esikhihla, ngangineminyaka ewu-26 ubudala, kusaphele iminyaka emithathu ngiqale ukusebenza njengentatheli okuwumsebenzi engangena kuwo ngenxa yomusa nezithukuthuku zomfowethu, uNhlanhla, owayeneminyaka ewu-32 ngesikhathi eficwa wukufa.
Kangibanga nakungabaza ukuthi lingishonele, lingilahlile elakithi nxa ngithola lezi zindaba kumfowethu.
Siwumndeni, lesi sigameko safika vele sisethuka izanya, kushubile endaweni. Ngomzuzwana nje laduma lasithatha. Ngazithola ngithuthumela, izinyembezi zigeleza ebusweni ngesikhathi ngibika kuzakwethu, uThulani Mbatha, ngokwase kungehlele.
UMbatha wayebhalela iphephandaba, iPost, ngaleso sikhathi, mina ngibikela iphephabhuku elalibika ngezikanobhutshuzwayo kuphela, iSoccer News, elavalwa ngemuva kwesikhashana kwehle lesi sigameko ekhaya.
Ngicabanga ukuthi ngavele ngesula ubuso, ngaxubha amazinyo ngaphambi kokunikela erenki ngiyobamba itekisi elibheke ekhaya.
Ngokwejwayelekile, kuthatha imizuzu ebalelwa ku-25 kuya ku-30 ukufika ekhaya, kodwa ngalolu suku kwaba ngathi itekisi leli lalindiza ngoba kimi kwaba sengathi yimizuzwana ewu-5.
Uma ngifika ekhaya, umuntu wokuqala engangifisa ukukhalela emagxalabeni akhe ngumama, uMaMpinga, kodwa ngathola ukuthi akekho emagcekeni akoBhungane.
ISIDUMBU SOMFOWETHU EMNYANGO
Kunalokho ngabingelelwa yisidumbu somfowethu omdala, uThemba, silele eduze komnyango kaguqa sithandaze okuyigumbi esilihlonipha kunawo wonke thina besintu ngoba yilapho sibikela khona abakwethu abangasekho ngempilo yethu enhle nembi.
Kukuyo le ndawo la sibacela khona abaphansi ukuthi basivikele olakeni lwezitha, kodwa ngaleli langa kubukeka sengathi lafika bengazelele.
Ngathi uma ngibuka ubuso obuhle bomfowethu uThemba (35), kwangathi uthi kimi: “Ungakhathazeki mfowethu, akukho obungakwenza ukusivikela namuhla.”
Ngakhihla esikaNandi. Ngathatha amagxathu ambalwa, ngidlwathuzela kuhle komuntu ongawa noma yinini, ngibheke phakathi kwezinye izindlu ezibuqamamana zomakhelwane bethu la babemkhomba ngakhona uMaMpinga.
Ngamthola phakathi ewumfunzana, ehleli etshanini, edinda engingakaze ngimbone esikhihla isililo eduze nesidumbu somfowethu, uNhlanhla. Umama wayekakwe yidlanzana lomakhelwane, abanye bezama ngakho konke ukumduduza.
Ukumbona ekulesi simo umama, ukumuzwa elila, kuyinto engasuki nanamuhla emqondweni wami. UNhlanhla wayelithemba lethu sonke, eyikho konke emndenini wakithi.
Unyaka nonyaka esesikoleni, wayebuya nemiphumela ekhomba ukuthi ubaqwaqwade bonke abanye abafundi emakhanda ephuma phambili ngamalengiso ezifundweni zakhe.
Sasiziqhayisa, siziqhenya, sizigqaja ngaye, kunguye esasethemba ukuthi ngelinye ilanga ikakhulukazi ngemuva kokuba ethweswe iziqu zeBachelor of Social Science e-University of Natal ngo-1991 uzosikhipha emaketangweni enhlupheko nendlala, kodwa ngemizuzwana nje, wonke lawo mathemba ayeseshabalele okwamazolo ebona ilanga.
Ngembula ingubo okwase kwembeswe ngayo isidumbu somfowethu, uNhlanhla, ngabona imbobo enkulu ekhanda lakhe nebhola lethenisi lalingangena kuyo ligijima.
Kwakungenzeka ukuthi yenziwa wukudutshulwa ngohlobo lwesibhamu esiyi-AK-47.
Odabeni olwaphuma kulo leli phephandaba (June 22, 2000) ngemuva kwezinsukwana kwehle isigameko, amaphoyisa aqinisekisa ukuthi ezibhanyini ezasetshenziswa ngababulali kwakukhona ama- 9mm nama-AK-47.
Kangikaze ngisibone isihluku esinjeya, kwakungathi ababulali babebulala omunye wemigulukudu abagila nayo imikhuba uhlobo lomgulukudu obeseluhluphe iminyaka luwuphunyuka bemphethe kubo.
Nginesiqiniseko ukuthi umama waluqalekisa kaningi usuku (11 March 1937), alethwa ngalo ngabazali bakhe emhlabeni.
Akekho umzali ofanele ukungcwaba amathumbu akhe.
Isimanga wukuthi kule minyaka ewu-20 senzeka lesi sigameko, uMaMpinga usamoyizela, efihla bonke lobu buhlungu adlula kubo. Ngokwami nje, uMaMpinga akehlukile kwezinye zezingqalabutho zomama bethu, imbokodo uqobo lwayo.
Iningi lomama bethu linjalo vele: cabanga bonke laba abazala amaqhawe omzabalazo. Babebhekene nobulwane bukahulumeni wabandlululo nsuku zonke, kodwa ukumoyizela nokuqiniseka ukuthi ikati kalilali eziko, kwakuyinto yabo.
AMAQEMBU EZIGELEKEQE ENDAWENI
Umnyombo walesi siga usuka esikhathini esingaphezulu kwe-zinyanga eziyisithupha lapho kwakubhoke amaqembu amabili ezigilamkhuba endaweni, kungathi ayaqhudelana ngokubulala abantu abangenacala.
Kwakuyilelo nalelo qembu lifuna ukukhombisa ukuthi yilona okukhala esalo isicathulo eDube Village. Kwakungekho nagama engilikhumbulayo ayaziwa ngalo la maqembu, kwakuyigenge nje iminyaka yayo yobudala eyayisukela ku-15 ingevile kwewu-30 iningi layo.
Umshana wethu owayeneminyaka ewu-18, uZuko Philangezwi Nomkruca, wayeyingxenye yelinye lala maqembu, engasahlali nasekhaya njengoba wayegila le mikhuba.
Esakuzwa nje wukuthi iqembu likamshana wethu, owabulawa naye ebugebengwini bakhe ngemuva kwezinyanga kubulawe abafowethu, lalikade lidubule labulala elinye ilungu lezimbangi zabo ezinkulu.
Ngalo lona lelo langa, kusempondo zankomo ngemuva kokuba iqembu likamshana libulale enye yezimbangi zabo izimbangi zanikela ekhaya ziyoziphindiselela kubantu ababengazi nakwazi ukuthi kubangwani.
Emasontweni ambalwa ngaphambi kwalesi sehlo, abafowethu babekade bengivakashele efulethini, bangilandisa ukuthi behluleka kangakanani noma kabazinikele kangakanani abakwaSidlodlo ukunqanda lolu dlame lwemigulukudu olwaluhlasele endaweni yakithi, luqhutshwa yizingane eziluhlaza cwe ezazihlome zithe shi ngezibhamu ezesabekayo.
Abafowethu bakhulumisa okwabantu okwakungathi sebeyazi ukuthi izinsuku zabo zibaliwe, nabo bazolandela bafele into abangayazi njengenqwaba yabanye abantu okwenzeka esifanayo kubo kuyo le ndawo.
Bangitshela ukuthi bayazi ukuthi okuzokwenziwa ngamaphoyisa wukulanda izidumbu zabo bayozifaka emakhazeni njengoba babenzile nakwabanye ababulawa ngendlela efanayo endaweni.
Iphelileke iminyaka ewu-20, kodwa lutho ukuthi abomthetho bangqongqoze emndenini wakithi bezosibuza imibuzo, bezosazisa ukuthi sebephenye baphelelaphi ngalesi sigameko nezinye ezehla ngesikhathi esifanayo endaweni.
Amaphoyisa sagcina ukuwabona emagcekeni akwaHadebe mhla ezothutha izidumbu zabafowethu eziyisa emakhazeni.
Akekho kwabomthetho oweza ekhaya ngemuva kosuku kwehle isigameko, zaphela izinyanga, yaphela iminyaka, lutho.
Kuyacaca-ke ukuthi le mihuzuko eminye esekhona namanje emzimbeni womfowethu, uMalusi siyoyithwala size siye nayo kwawethu amangcwaba, kungekho ozosivikela.
Ngemuva kokuba sifihle abafowethu, kwacaca ukuthi kumele sibaleke ekhaya, sibalekela into esingayazi.
Ngasekupheleni kuka-2000, umama wathi kumele sibuyele ekhaya siyobhekana ngqo nababulali.
Kwakungekhona ngoba ulaka lwababulali lwase lwehlile, kodwa kumama kayikho enye indawo ayengayibiza ngekhaya langempela ngaphezu kwalapho okwaphangalala khona izingane zakhe.
Iwu-24 iminyaka umama ayeyichithe nathi kule ndawo ngaphambi kwesigameko.
Umbuzo wami-ke uthi mingaki eminye imindeni efela ngaphakathi ngenxa yobuthuntu bamaphoyisa ethu ekulandeleni amacala ashiya inkebenkebe yamanxeba angavaleki ezihlotsheni zalabo ababulawayo benecala noma bengenalo?
Esikwaziyo sonke wukuthi uma labo ababulewe nezihlobo zabo bengelutho emehlweni abomthetho ezindaweni okuhlala kuzo kakhulu abamnyama nezibukelwa phansi njengeDube Village, amaphoyisa agcina ngakho ukuthatha izidumbu angaphinde abheke emuva.
Ukungalandeleli kwamaphoyisa yikho-ke lokhu okunika izigilamkhuba iqholo loku-qhubeka nemisebenzi yazo.
Yingakho namuhla kukhona izindawo ezibizwa ngo ‘alubhadwa’ ezifana namahostela aKwaMashu naseGlebelands eMlazi, la kunezinkunzi ezibizwa ngezinkabi namuhla, ezijuqa abantu kungabi ndaba zalutho.
Njengomndeni, kade sabaxolela labo abagasela amagcekeni kababa bashintsha yonke impilo yethu. Iningi lalabo esasibasola ukuthi bayathinteka ekubulaweni kwabafowethu, sebabulawa kuyo imisebenzi yabo yobumnyama, kodwa uma esekhona owabulala noma owabona lokhu okwenzekayo, njengomndeni singajabula ukwazi ukuthi udlame olungaka kwakungolwani kubantu ababengenalo icala ngokwazi kwethu.
UMaMpinga iminyaka yakhe yobudala esiyevile kwewu-80 usamoyizela nanamuhla.
Ngesikhathi ngimazisa ukuthi ngifuna ukubhala ngalolu daba lomndeni, izinyembezi zehla zompompoza entombini endala, yathi: “Ubatshele ndodana ukuthi ngalokhu okuncane esinakho, siyaphila.
“Ngomusa kaThixo sisekhona. Kule ndawo yakithi siyazi ukuthi kunenqwaba yabantu abangazi ukuthi bazothathani bayihlanganise nani uma kukhulunywa ngokuthiba indlala nokufihla ikhanda endaweni efudumele.
“Okungangenza ngibe nokuphumula enhliziyweni nxa esengibiza nami uMdali, wukuthi ngazi ukuthi niphephile futhi bakhona abomthetho… bona laba esasinethemba lokuthi bazosivikela noma benze okuthile ngalokho okwenzeka lapha ekhaya eminyakeni engamashumi amabili edlule.”
Previous articleIsengcupheni imiholo yabaqeqeshi beBafana
Next articleUKhuzani uzovela emdlalweni iMbewu